हल्ला इन्सुलेशन ढोका: cheaply र कुशलतापूर्वक
तपाईं केवल एक कार को पाङ्ग्रा पछि कहिले काँही भने पनि, सानो घर सान्त्वना एक कुरा तर्फ बाँकी गर्न सकिँदैन। कम थकान, सुधार: यो एक सम्पूर्ण रूपमा ढोका को इन्सुलेशन र कार भित्री ड्राइभरको स्वास्थ्य स्थिति मा एक लाभदायक प्रभाव छ साबित भएको छ एकाग्रता। यो हल्ला स्तर बस आदर्श मा फिट गर्न छैन। एक सान्त्वना क्षेत्र स्वतः कम से कम सापेक्षित मौन implies। सुविधाजनक र आरामदायी ठाउँ मा स्वतः दोकान कसरी खोल्न?
को हल्ला कहाँ र कसरी यसलाई हटाउन?
कार को सबै एकाइहरूको सञ्चालन जसरी मात्र होइन हल्ला, तर पनि कंपन प्रसारित छन् जसको लागि सबै सतहहरु को एक अनुनाद कारण सक्षम छ जो कम्पन, सँगसँगै। त्यसैले थप हल्ला, त्रुटिहरू को streamlining कारण बढेको हुन सक्छ जो छ।
कम गर्न प्रारम्भिक कार्य गर्ने हल्ला स्तर को सानो घर मा, प्राविधिक विधिहरू लागू गर्नेछ। ध्यान दिएर रूपबाट इन्जिन, कार को पूर्ण उपयोगिता, अडियो सिस्टम को सही स्थापना - यो सबै कम र आंशिक काम पूरा गर्नु अघि विभिन्न शोर हटाउँदछ। हल्ला एकदम महत्त्वपूर्ण छ जो खोल्ने ढोका र समापन, र थर्मल इन्सुलेशन पनि सुधार को निर्विघ्नता, सुधार जब सानो घर मा हीटर वा वातानुकूलन। उपयुक्त उन्नयन स्टेशन मा हुन सक्छ आदेश मर्मतका, तर यो आफ्नै सामना गर्न सम्भव छ।
प्रभावकारी ध्वनि इन्सुलेशन ढोका आफ्नो हातमा
इच्छित अवस्थामा कार ढोका ल्याउन तपाईं विशेष सामाग्री मा शेयर गर्न आवश्यक छ। यो सतह तयारी लागि vibroplast र रवशामक, र विशेष गोंद र उपकरण आवश्यक छ। यो इन्सुलेशन ढोका भित्री छाला हटाउने सुरु। यो मौका र सुग्घर, तंत्र ढोका शरीर लुकेका आवश्यक भएमा लिनुहोस्। सबै दूषण uaytspirtom मा भिगो एक कपडा संग हटाइएको: तपाईं धूलो, माटो र degreased सतह धुन।
Vibrodempfer (vibroplast) - हल्ला एक कारण हो जो अवशोषित र कम्पन dampens एक सामाग्री छ। यो कम्पन अवशोषित गर्न भौतिक को क्षमता अाकार घटबढ को क्षेत्र मा केहि कम छ उल्लेख गर्नुपर्छ, तर यो सामान्य हो।
Vibroplasta बाहिरी तह ढोका शरीर भित्र चिपके छ, यसरी हेरविचार गल्ति भएको नाली खुलने र वेंटिलेशन बन्द गर्न लग्नु गर्नुपर्छ। अस्तर vibroplasta पनि चिपके। कि पछि, सबै सतहहरु रवशामक चिपके छन्, र भित्री अस्तर ठाउँमा राख्नु छ।
कति ढोका को इन्सुलेशन गर्छ?
तीन दस हजार rubles देखि लागत - सामाग्री को उच्च लागत र चुनिएको विधि आधारमा - आफ्नै वा कार्यशाला मा। एकै समयमा हामी तपाईंको मिसिन को सुरु सुविधाहरू खातामा लिनुपर्छ। बाटो साथ सानातिना मरम्मत आवश्यक छ भने, ह्यान्डलहरू र Windows को बलियो बनाउँछ, मूल्य उच्च तपाईं अपेक्षा गरेको भन्दा बढी हुन सक्छ। तपाईं राम्ररी अझै पनि तिनीहरूलाई भेला हुनु आवश्यक - तथापि, कार ढोका को आत्म-इन्सुलेशन सम्भव तपाईं आफ्नो क्षमता मा विश्वास गर्दै छन् भने मात्र, अलग केही ढोका र गोंद किनभने छ।
कसरी महत्त्वपूर्ण भएको कार्बोरेटर सफाई छ
कसरी ब्याट्री चयन गर्न
नयाँ मित्सुबिशी Montero खेल
हीटर कूलेंट सवारीसाधान। हीटर कूलेंट कसरी स्थापना गर्न
"वोल्वो CX 90": सुविधा र समीक्षा
कार ब्रान्डहरु र आफ्नो लोगो
को "ओपेरा" मा आन्तरिक सञ्चार त्रुटि: कारण र समाधान
घर कफी निर्माता लागि दर्जा: प्रकार, निर्माता र समीक्षा सूची
पहिले र प्रसब पछि Enema केटी
Azalea। नाम को मूल्य र उनको प्राण को रहस्य
प्रभावकारी घाउ-निको मलम: द्रुत प्रभाव। दबाइहरु
Requiem - प्राणको सुरक्षित शब्दहरू
रगतको चौथो समूह। प्रमुख सुविधाहरू